ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနှင့် ကျနော့်အမြင် (၁)
ထပ်မေးမယ်။ မင်းက ဘာဖြစ်စေချင်တာလဲ။ မင်းဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲ။ ကီးဘုတ်တော်လှန်ရေးမဟုတ်ဘူးနော်။
aung ko ko htike said...
ဦးပေါ... မြန် မြန် ရေး ...စောင့်ဖတ် ရ တာ မော တယ်
ငပေါ . . .
စောဘဦးကြီးတို့ခေတ်က တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်နဲ့ အခုတိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်ဆိုသူတွေရဲ့ ကွာခြားချက်တွေကို သေသေချာချာလေ့လာပါဦး။ little knowledge is very dangerous.
သူတို့ပေးမှ ရမယ့်အရာ ဖြစ်နေပါပေါ့လား။ အို...ဘယ်လိုပဲ ရရ ။ ရရင် ပြီးရော
မဟုတ်ဘူးလား။ ရရင် ရ ၊ မရရင် ချလို့ အော်ခဲ့တာ။ ရမှ မရပဲကိုး။(Blueskyforest)
ကီးဘုတ်တော်လှန်ရေးလား အီးဘုတ်တော်လှန်ရေးလားတော့မသိဘူး မင်းဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲ ငါဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲမမေးနဲ့လေ လေကုန်မှာပေါ့၊ ဘာတွေများဒေါသထွက်နေတာလဲ၊
Ko Paw, I agree that Singapore PR may
be permanent but re-entrant permit is
not permanent. So that means you have
to apply for extension every5or 10
years. So I wonder whether renewal time is closing soon. Is that why
are you blogging and attacking
Anonymous said... October 4, 2011 5:22 AM
မိတ်ဆွေရဲ့ လင့်ခ်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
လူထု ဦးစိန်ဝင်းက ချုံငုံ သုံးသပ်ပြတာဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ယုံကြည်ဆဲ၊ ထောက်ခံဆဲ သာမန်လူတွေ ပြောထာထက် ပြိုပီး စနစ်ကျပါတယ်။ ပိုပြီးတော့ ထိုက်သင့်သော အားသက်ရောက်မှု ဖြစ်စေပါတယ်။
ကိုပေါအနေနဲ့လည်း လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေတွေကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဝေဖန်နေတာကို နားလည်သလို ကြိုလည်းကြိုဆိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ယခုလို အဖြူအမည်း ကွဲကွဲပြားပြား မသိသေးချိန်မှာ အဆိုးတွေကိုပဲ တွေးရေးမနေပဲ အကောင်းဘက်ကို ရှုမြင်ရင်း ဖြစ်လာနိုင်မယ့် (သို့) ဖြစ်နေသေးတဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကို ထောက်ပြ ဝေဖန်တဲ့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဝေဖန်မှုမျိုးဖြစ်စေချင်သလို ပိုပြီး သင့်တော်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဒီပို့စ်ကိုတော့ နှစ်သက်ပါတယ်။ ကိုပေါရဲ့ စာကောင်း၊ အတွေးအခေါ်ကောင်းတွေ ပြန်ဖတ်ရဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဧရာဝတီ အောင်ဇော်နဲ့အင်တာဗျူး
ဒေါ်အောင်ဆန်းကြည်၏ လက်ဆောင်ရွက်ချက်များကို ရှုံချ ကဲ့ရဲ့ သည့် ကာတွန်းများ၊ ဆောင်းပါးများ online ပေါ်တွင် တွေ့ ရှိပါက ကိုပေါ ထံသို့ ပို့ ပေးကြပါ။ သူ့ ဘလောဂ်မှာဖြစ်စေ၊ facebook မှာဖြစ်စေ အားရ၀မ်းသာစွာ ပြန်လည် မျှဝေပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
မကြာခင်မှာ ပသုံးလုံး (ပြည်သူ့ ငပေါကြီးများပါတီ) ကို ပေါကြီးမှ ဦးဆောင်ပြီး ပြည်တွင်းပြည်ပ ရွာအပြင်ထုတ်ရမည့်ပုဂိုလ်များ အစိုးမြင်ဝါဒီများနှင့် ဖွဲ့ စည်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
I like your blog and I agree with 70 percentage of your opinion.
I think we need to change world history.I might be wrong but I think
in1942 they recognize as Japanese invade and in1943 British started attack back from Rakkhing state and before Tatmadaw Day they reoccupied Mandalay.